Deeqdii Caalamka oo la suuq geeyey | allsanaag
Deeqdii Caalamka oo la suuq geeyey
Qalabkii dowladda loogu deeqay waxaa qaarkood lagu arkay Bakaaraha
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay hambalyada Ciida ayaa sheegay in qalabkii dowladda loo keenay ee loogu tala galay in lagula tacaalo Coronavirus in lagu arkay Suuqyada.
Sheekh Shariif oo ah Hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sheegay in qalabkaas oo dowlado badan ay ku deeqeen aan loo isticmaalin sidii loogu tala galay, isla markaana suuqa ay galeen.
“Waxaan la soconaa in qalab farabadan ay dowlado kala duwan keeneen, waxana muuqata in sidii loogu talogalay loo isticmaalin oo qaarkood naloo sheegay in suuqa lagu arkay, arrimahaasi ma fiicna amaanada sidii loo keenay in loo guto ayaa la rabaa” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Sidoo kale waxaa uu ku dhaliilay dhaqaatiirta dalkaan wax u soo barta in xilligan oo dalka ku jiro xaalad halis ah ay caafimaad ahaan ka fikiraan dhaqaale, ayna ku tahay ceeb inay mar walba sidaas u fikiraan.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa isa soo tarayay warar sheegaya in suuqya ay soo galeen agabyo dowladda loogu deeqay ee loogu tala galay in lagula tacaalo Coronavirus, sida agabka gafuurka lagu xirto ee loo yaqaan Maskface, daawooyinka jeermis dilaha iyo kuwa kale.
← Qodobka 80aad iyo 81aad ee Dastuurka Puntland Eid Mubarak →